Author: Kazralar Vigal
Haddii Baarlamaanka Federaalka uusan oggolaan ama uusan waqti ku darin xaalad degdeg ah, markaa xaaladda degdegga ah ma jireyso.
Mowduucyada la xiriira Soomaaliya. Iskaashiga Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka Cutubka 5aad Dhul, Hanti iyo Degaan. Dadargelinta qoddobada ka soo baxa dib u eegista dastuurka ayaa la sheegay in si loo ansixiyo dastuurka loo baahan yahay afti dadweyne, soomaaliya Soomaaliya ay uga qabsoonto doorasho qof iyo cod ah sannadka ka. Muddada xilhaynta 1 Muddada xil-haynta Baarlamaanka Federaalku waa afar sano oo ka bilaabata maalinta natiijada doorshada lagu dhawaaqo.
Hawlwadeennada iyo Shaqaalaha Dawladda a Hawlwadeennada iyo Shaqaalaha Dawladdu waxay xilkooda u gudanayaan si waafaqsan sharciga iyo danta guud oo keliya. Faafinta iyo Xafidaadda Sharciyada Cutubka 4aad Waajibaadka Jamhuuriga ah.
Dood kaddib haddii hindisaha sharciyeed ay oggolaadaan saddex dalool laba dalool mudanayaasha Golaha Shacbigu, waa in hindisaha sharci loo gudbiyaa Aqalka Wakiilada dowlad-goboleeddada. Guddoomiyaha iyo Garsoorayaasha Maxkamadda Dastuuriga ah; 3.
Hindise Sharci oo Qabyo ah oo ka bilowday Aqalka Sare. Tirada xubnaha Golaha Shacabka Xubnaha Guddiga Xuduudaha iyo Federaalaynta; 5. Awoodaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah 1.
Habraaca Sharci-dejinta Baarlamaanka Qodobka 79aad. Nidaamka Doorashooyinka iyo Xisbiyada Shuruucda ku saabsan Xisbiyada, Diiwaangelintooda, Doorashooyinka heerka dowladda federaalka ah iyo Guddiga Qaranka ee Madaxbanaan ee Doorashooyinka, waxaa lagu qeexi doonaa shuruuc gaar ah oo uu soo saaro Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka ee Jamhuuriyadda. Cutubka 8aad Baarlamaanka Federaalka.
Xiriirka Iskaashiga Heerarka Dawladaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Heer kasta oo Dawladeed ha ahaadeen heerar siman ama kuwo kala sarreeya waa in ay yeeshaan xiriir iskaashi oo wanaagsan 1 Dawlad kasta waa in ay ixtiraamtaa, ilaalisaana xadka awoodaha ay leedahay iyo awoodaha ay leeyihiin Dawladaha kale, waana in ay: Xeer-hoosaadka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah 1 Golaha Shacabku ee Baarlamaanka Federaalka ah waa in uu samaystaa xeer-hoosaadkiisa, kaas oo siinaya ka-qaybgal buuxa xubnihiisa.
Deegaanka 1 Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu helo Deegaan aan waxyeello u lahayn caafimaadkiisa iyo baraarihiisa nololeed oo laga ilaaliyey wasakhda iyo waxyaalaha halista ah. Wassiirka la magacaabay soomaaaliya uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska. Dastuurka Soomaaliya oo dhamaad ku dhow 16 Maajo Shacabka iyo Jinsiyadda 1 Shacabka Soomaaliyeed waa mid, lamana kala qaybin karo, wuxuuna ka kooban yahay dhammaan muwaadiniinta.
Cutubka 16aad – Qodobbada Guud. Haddii Golaha Wasiiradu ay ansixiyaan, magacyada waxaa loo gudbinayaa Baarlamaanka Federaalka labada aqal Haddii Baarlamaanka Federaalka uu ansixiyo magacyadaas, waxaa loo gudbinayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka, si uu magacaabistooda xeer uga soo saaro.
Kal-Fadhiyada Golaha Shacabka 1 Golaha Shacabka ee Federaalka ah ee cusub, fadhigiisa koowaad waa inuu ku qabsoomaa 30 maalmood gudahood kaddib marka lagu dhawaaqo soomaaliyaa doorashada guud.
Dhaqangelidda Sharciyada Hindise sharci qabyo ah wuxuu dhaqan-gelayaa kaddib marka uu maro habraaca sharci- dejinta ee ku xusan qaybtan, Madaxweynaha Jamhuuriyadduna saxiixolaguna soo saaro Faafinta Rasmiga. Musharraxiinta jagada madaxweynuhu waaa in ay soo magacaabaan qofka ay u xusheen jagada madaxweyne ku-xigeenka kaasoo noqonaya madaxweyne ku-xigeen haddii uu guuleysto musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka madaxweynaha.
Guddoomiyaha iyo Ku-xigeennada Golaha Shacabka Waajibaadka Caalamiga Ah Inta heshiiska wax waajibinaya ee jirey taariikhda uu Dastuurkan dhaqan gelayo uu waqtigiisu dhacayo ama wax laga beddelayo, daxtuurka heshiiskaa ka dhashey sidiisa ayuu u jirayaa Qodobka aad. Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay haynayaan xafiiska ugu badnaan labo xili oo midkiiba uu yahay 5 sano.
Xorriyadda Kulanka, Bannaanbaxa, Cabashada iyo Codsi-wadareedka Qodob kale oo Warar ah. Taariikhda fadhiga la sooomaaliya waxaa goynaya Guddiga Qaranka ee Madax-bannaan ee Doorashooyinka. Log In Sign Up.
Golaha amaanka ee qaramada midoobay wuxuu cadeeyey walwal uu ka qabo in xukuumadda kmg ee somalia ay dib ug dhacday jadwalkii bishii ahaa in bisha August dalku uu yeesho dawlad rasmi ah oo joogta ah. Nidaamka Doorashooyinka iyo Xisbiyada Waxabarashada 1 Waxbarashadu waa xuquuq aasaasiga ah ee ay leeyihiin dhammaan muwaaddiniinta Soomaaliyeed. Somaaliya Dacwadda iyo Isdifaaca 1 Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu dacwad sharciga waafaqsan ka furto maxkamadaha awoodda u leh.
Gobannimada iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa laguma-xadgudbaan. Maamulka dadweynaha3. Xilka Xubnaha Baarlamaanka 1 Xubin kasta oo ka mid ah labada Aqal ee Baarlamanka Federaalka marka ay xilkeeda gudaneyso waa in ay ku shaqaysaa sida ay danta qaranku ku jirto.
Qodobka 76, faqrada 5 – Ansixinta dacwad ku oogid ee khiyaamo Qaran oo wayn ama tallaabo isku day oo slomaaliya ku ah nidaamka Dastuurka ama oggolanaasho in la bilaabo tallaabo sharci ka qaadid ee dembi kuna saabsan debmi kale ee kasta waxay u baahanayaan in si deg-deg ah loo laalo awoodaha Madaxwaynaha.
Iscasilaadda Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Madaxweynuhu wuxuu u gudbinayaa istiqaaladiisa Barlamaaanka Federaalka, isaga soomaaliyw marsiinaya Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah.
Qaadashada wax ka bedelka Dastuurka inta lagu guda jiro muddo xileedka koowaad ee Aqalka Shacab; soomaliya Dastuur kama dambays ah Dhaarinta Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Inta uusan xilka bilaabin, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalku wuxuu Baarlamaanka Federaalka hortiisa ku marayaa dhaar, waxaana dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamadda Sare, dhaartaas oo ah sidan: